Tirada dadka uu dilay Ebola oo cirka isku shareertay – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Tirada dadka uu dilay Ebola oo cirka isku shareertay
A warsame 11 October 2014 11 October 2014
Mareeg.com: Dadka uu dilay cudurka Ebola ayaa sidaaday, sida ay sheegtay hay’adda Caafimaadka Aduunka ee WHO.
Tirooyinkii ugu dambeeyay ee soo baxayay ayaa tilmaamaya in dhimashada ka dhalatay cudurka Ebola ayaa haatan marayso 4,024 qof. 8 qof ayaa la sheegayaa in cudurka ay ugu dhinteen Nigeria iyo Mareykanka.
Madaxa Bangiga Adduunka, Jim Yong Kim, ayaa ku baaqay in la sameeyo khasnad gaar ah oo deg deg ah oo wax looga qabto cudurka Ebola.
Waxa uu sheegay in lacagtaas ay tahay in loogu deeqo wadammada la halgamaya cudurka. Hadalkiisa ayaa ku soo beegmaya iyadoo ay jirto dhaleecayn ah in jawaabta caalamka uu ka bixiyay cudurka ay tahay mid aad gaabis u ah.
Dhinaca kale xubnaha baarlamaanka ee dalka Liberia ayaa diiday inay u codeeyaan qodob sharci ah oo madaxweynaha dalkaasi siin lahaa awood ay xaalad deg deg ah ugu soo rogto degaanada uu ka jiro cudurka.
Madaxweyne Ellen Johnson Sirleaf, ayaa horay deegaanada qaar ugu soo rogtay xaalad deg deg ah, oo lagu karantiilayo bukaanada qaba cudurka Ebola.
Dhanka kale khubaro caafimaad uu u dhashay UK ayaa soo saaray talaal la filayo inuu wax ka taro ka hortaga cudurka Ebola, kaasoo lagu tijaabiyey xayawaanka Daanyeerka, islamarkaana sida ay sheegeen uu ka difaacay inuu haleelo Ebola.
Khubaradan ayaa sheegaya inet talaalkaan ogolaasho uga sugayaan wadamada Miwodga Yururb iyo Mareykanka si dunida looga isticmaali karo.
Wadahadal Garowe uga furmaya dowlada federalka iyo maamulka Puntland
UN: Suuq furan ayaa lagu iibiyaa hubka ciidanka Soomaaliya
Categories Select Category Af Soomaali (10,684) Africa (2,395) Algeria (4) Angola (11) Burkina Faso (1) Burundi (14) Cameroon (32) chad (7) congo (61) Djibouti (29) Egypt (68) Eritrea (48) Ethiopia (175) gabon (2) gambia (6) Ghana (21) guinea (1) Guinea-Bissau (4) Ivory Coast (5) Kenya (272) Liberia (23) Libya (76) mali (8) Mauritanian (1) Morocco (20) Namibia (2) niger (8) Nigeria (54) rwanda (15) Sierra Leone (13) South Africa (91) south sudan (94) sudan (41) Tanzania (16) Tunisia (10) uganda (55) Zambia (16) Zimbabwe (27) Asia (427) Afghanistan (19) Bangladesh (4) china (218) India (24) indonesia (12) Malaysia (1) mynamar (6) north korea (2) pakistan (17) Philippine (3) Singapore (1) Australia (16) Business (291) Business (6) canada (1) Economy (168) Editorial (521) Education (39) Entertainment (67) Europe (628) Austria (9) belgium (1) France (26) German (38) Ireland (3) Italy (17) Rusia (35) spain (37) turkey (43) Ukraine (4) United Kindom (185) Exclusive (7) Fashion (4) Featured (8,331) Food (54) Health (241) Horn of Africa (165) Islam (84) Mareeg العربية (3) Middle East (400) Iran (16) Iraq (37) Israel (58) kuwait (4) qatar (10) Saudi Arabia (58) syria (40) UAE (11) Yeman (29) Notices (6) Opinion (58) Our Contacts (1) politics (54) Science (67) Senegal (2) sheeko-jaceyl iyo love (5) sidebar (3) Somalia (5,450) Archive of mareeg (12) Sports (289) technology (58) travel (8) ubax-sheeko.htm (1) Uncategorized (250) United states of america (254) World news (599) PARAGUAY (1) Venezuela (4)